Deg deg: Madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak oo xabsiga laga sii daayay | Entertainment and News Site
Home » News » Deg deg: Madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak oo xabsiga laga sii daayay
Deg deg: Madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak oo xabsiga laga sii daayay
daajis.com:- Madaxweynihii hore ee waddanka Masar, Maxamed Xusni Mubaarak ayaa maanta xabsiga laga sii daayay.
Waxaa xabsigaasi la geliyay 2011 markii xukunka laga tuuray.
Waxaa lagu hayay cisbitaal milateri oo ku yaalla caasimadda Qaahira.
Go’aankan ayaa daba socda xukun ay horraantii bishan riday maxkamad, taasoo ku weyday dacwado la xiriirinayo dilka tobanaan dibed baxayaal ah oo ka qeyb qaadanayay mudahaaradyadii xukunka looga tuuray sanadkii 2011.
Mudadii la hayay, ayaa Mr Mubaarak waxa uu qaatay xabsi saddex sano ah, kaasoo uu ku mutaystay wax isdaba marin.
Qareenka Mubarak Farid El Deeb ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in uu haatan ku sugan yahay Mubarak guriga uu ku leeyahay Heliopolis oo ah degmo ku taal meel aan ka fogeyn madaxtooyadii uu muddo soddon sano ah ka maamulayay dalka Masar kadib markii laga saaray isbitaal ay ciidamada Milatariga ku leeyihiin koofurta Qaahira halkaa oo lagu ilaalinayay.
Qareenkiisa ayaa sheegay in aan loo oggolaanin wali inuu gurigiisa ku laabto.